Angry Birds Seasons 2.3.0 Full Patch...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Angry Birds Seasons 2.3.0 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!အရင်တစ်ခါလည်း ကျွန်တော် တင်ပေးထားပါတယ်...!ဒီကောင်လေးကတော့ Update လေးထွက်လာလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ...!အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့အခါ Game လေးတွေဆော့ပြီး အချိန်တွကို ဖြုန်းပြစ်လိုက်တယ်...!ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူး စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်ရှာလိုက်တာပေါ့...!အခု"အောင်အောင်..."ဆော့နေတာ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကျွန်တော့်လို ထွက်ပေါက်ရချင်ရင် ယူသွားပါ...!ကျွန်တော် Patch ဖိုင်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်...!Install Note ကိုသေချာဖတ်ပြီးမှ Install လုပ်ပေးပါ...!ဒါမှ Full Version လေးရမှာပါ...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 55.09MB ရှိပါတယ်...!စိတ်ဝင်စားရင်တော့ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
1. Install Angry Birds (After Finish Install Dont not Launch it first)
2. Open Folder Patch> Patch
3. Click / Run on Patch
4. Search Target Example --> C:\_Program Files\_Rovio\_Angry Birds Seasons "AngryBirdsSeasons"> Open
5. If successful, his exit Patcher
6. Copy this Serial : THET-ALEV-LEFR-USWO
7. Entered into his Games
8. Click the "Active Full Version!" (located at bottom)
9. Paste the last series
10. Click on Register
12. Enjoy the Game
1 Response to Angry Birds Seasons 2.3.0 Full Patch...!